Ralaimongo Jean - Wikipedia
Tsangambato fahatsiarovana Jean Ralaimongo Antananarivo
Jean Ralaimongo (1895-1944) dia mpitolona politika malagasy, nasiônalista sady framasô izay nandray anjara tamin' ny fananganana ny Ligue française pour l’accession des indigènes de Madagascar aux droits des citoyens français ny taona 1920. Izy no ho filohany.
Tantaram-piainany[hanova | hanova ny fango]
Tamin’ny fahazazany, Jean Ralaimongo dia nahazo avy amin’ny fianakaviana frantsay mba hokaramaina ho mpiasa ary nentina tany Frantsa metropolitanina izay nianarany sy nahazoany ny mari-pahaizana momba ny fahaiza-manao fototra izay nahafahany ho mpampianatra teto Madagasikara. Rehefa niverina tamin’izany izy, dia nisy zavatra roa voasakana ny asany: nolavina ny toeran’ny mpampianatra noho ny tsy nahazoany ny fitovian-jo amin’ny asa izay nahafahany niasa tao amin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, Naleon-dRalaimongo, tamin’ny fotoan-tsarotra, raha jerena amin’ny fomba fijery ara-jeopolitika, ny niditra tao amin’ny tafika frantsay tamin’ny 1914 mba hiaro ny taniny amin’ny fandrahonan’ny Empira Alemàna.
Niverina tany Frantsa izy dia lasa akaiky kokoa ny vondron'olona manohitra ny fanjanahantany (Vy Vato Sakelika, VVS) sy ireo solontena mafana fo indrindra, toa an'i Ho Chi Minh izay namany sy ilay mpahay toekarena Charles Gide izay nitondra azy ho fanohanana ny Ligue des Droits de l'Homme izay nahazoan-dRalaimongo aingam-panahy ho an’ny Ligue pour l'Accession des Malgaches à la Citoyenneté Française. Amin’ity ligy ity dia miady amin’ny ady politika i Jean Ralaimongo, tamin’ny alalan’ny gazetiny l’Opinion, nanomboka ny taona 1920 ka hatramin’ny 1939, nanameloka ny fanararaotana izy ary nitaky ny “Madagasikara departemanta (ampitan-dranomasina) frantsay” ary ho an’ny zom-pirenena frantsay malagasy rehetra tahaka ny izay olona teraka eo amin’ny tanin’ny firenena. Ny tolona ataony dia miainga indrindra amin’ny hevitra fa ny fanakambanana an’i Madagasikara dia tokony ho nahatonga ny Malagasy rehetra ho voajanaharin’ny firenena rehetra sy ny fidirany ho olom-pirenena frantsay tsy misy fanavakavahana, toy ny nametrahan’ny Repoblika Frantsay an’i Madagasikara nanomboka tamin’ny 13 Novambra 1899 niaraka tamin’ny ny fitondrana kolonialin'ny Indigénat izay apetrany ao Cochinchina, Nouvelle-Calédonie, Senegaly, Afrika Andrefana Frantsay manontolo, Afrika Ekoatôrialy Frantsay, Tôgô ary Kamerona.
Nisy rafitra nampidirin’ny Frantsay hametrahana komity roa izay ho solontena ho an’ny vahoaka, saingy tsy nanana fahefana ireo olona ireo. Nantsoina hoe Délégations Économiques et Financières ireo komity ireo ary fandresena ho an-dRalaimongo, saingy nitarika azy ireo mafy ny fitondrana, niady hevitra tamin’ny mpanjanaka sy tsy niraharaha ny Malagasy. Mampalahelo izany satria zara raha nahazo traikefa momba ny demokrasia ny mponina
Tamin'ny 1929, mpanao fihetsiketsehana 3 000 no nitsangana taorian'ny fivoriana tao amin'ny sinema tamin'ny 19 Mey izay nandrenesan'izy ireo ny lahatenin'i Paul Dussac. Nitangorona nanodidina ny biraon’ny Governemanta tao Antananarivo izy ireo ary nirongo hazo sy saina mena. Tamin'ny fotoana nahatongavan'ny governora jeneraly Léon Cayla, ny famoretana nataon'ny polisy dia nahatonga ireo mpitarika ny fihetsiketsehana tamin'ny 19 May. Niezaka nampitombo ny isan'ny fangatahana zom-pirenena frantsay ny jeneraly vaovao saingy mbola ambany dia ambany, ary tsy ampy amin'ny fitakian'ny mpanao fihetsiketsehana ny fanaovana naturalisation faobe.
Ralaimongo sy Joseph Ravoahangy dia notanana am-ponja vonjimaika ny taona 1930, ary tsy nahazo famotsoran-keloka raha tsy tamin’ny 1936.
Rehefa afaka izany[hanova | hanova ny fango]
Maty tamin'ny 1944 i Ralaimongo ary tamin'ny faran'ny Ady Lehibe Faharoa vao navelan'ny Fitondrana Frantsay hanana endrika demokrasia. Tamin’ny faran’ny taona 1945 dia olona roa no nofidian’ny Malagasy hisolo tena azy ireo tany Paris. Ireo dia Joseph Raseta sy Joseph Ravoahangy. Samy nanolo-tena ho an'i Madagasikara amin'izao fotoana izao izy ireo.
Tamin'ny 29 martsa 1947 dia nampitsahatra ny fikomiana teto Madagasikara ny Frantsay. Tombanana ho 80 000 no maty, fa ny tombantombana taty aoriana dia nametraka ny isa ho 11 000.
Nahazo ny fahaleovantenany i Madagasikara tamin'ny 26 Jona 1960.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ralaimongo_Jean&oldid=1043943"
Voaova farany tamin'ny 12 Febroary 2022 amin'ny 07:54 ity pejy ity.